မမေးသင့် တဲ့ မေးခွန်းမရှိဘူး ဆိုသူများသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မမေးသင့် တဲ့ မေးခွန်းမရှိဘူး ဆိုသူများသို့
မမေးသင့် တဲ့ မေးခွန်းမရှိဘူး ဆိုသူများသို့
Posted by khin on Jun 23, 2010 in News |5comments
ငါ စာနယ်ဇင်းသမားဆိုပြီး မေးချင်တာမေးလို့မရပါ. ရိုးရိုးလူတွေတောင် သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး မေးရပါတယ်.ဥပမာ..လစာမကောင်းသော အလုပ်ကို မတတ်သာလို့ လုပ်နေရတဲ့သူကို(ကိုယ်ကလည်းအနည်းအကျဉ်းသိပြီးသား) မင်းလစာ ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် မဖြေချင်ပါ။သမီးလင်နောက်လိုက်လို့ စိတ်ဆိုးနေသော လူကို ခင်ဗျားသမီး ဘယ်သူနဲ့လိုက်သွားလဲ.ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သွားလဲ.တဆင့်တက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ ကဘာဖြစ်လို့ လွှတ်ထားလဲ မေးရင် ဖြေချင်မှာ မဟုတ်ပါ.နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်စုမိပြီလဲ.ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဘယ်နှစ်သက် စားလို့မကုန်ဖြစ်နေပြီလဲ.ဘယ်တော့ အနားယူဖို့ စဉ်းစားထားလဲ မေးကြည့်ပါ….
အခုသတင်းထောက်ကို လက်ရှိ ရည်းစားရှိလား၊ ဒီရည်းစားက ဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်လဲ၊ ရည်းစားနှင့် တွေ့ရင် ဘာလုပ်သလဲ။ ဒီတယောက်မကောင်းရင် နောက်တယောက်ပြောင်းမှာလား၊ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုစာမျိုးတွေ ဖတ်ဖူးထားလဲမေးကြည့်ပါ…ကိုယ်ချင်းစာလို့ မေးမြန်းတတ်ကြပါစေ
khin htike has written 1 post in this Website..
View all posts by khin →
လုပ်လွှတ်လိုက်မယ်…ကျွန်တော့်ကိုလာပြီး မိန်းမကွယ်ရာမှာ ဘယ်နှစ်ခါသောက်လဲတို့…စင်တင်တွေဘာတွေရောက်သေးလားတို့…လာမေးလို့ကတော့..
မေးတဲ့လူကလည်းpersonal မေးခွန်းတွေမမေးသင့်တာတော့အမှန်ပဲ ။ အမေးခံရတဲ့လူကလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ သူ့အမှားကနေ ကိုယ့်အမှားဖြစ်သွားတာပေါ့ ။နောက်ဆိုရင် မမေးသင့်ဘူးထင်တာတို့ စော်ကားတယ်ထင်တာတို့ဆို အရှက်ကွဲမဲ့အတူတူ ပါးမရိုက်နဲ့ နပန်းသာဖက်လုံးပေတော့ ။ :D
ဟုတ်တော့လဲ ဟုတ်တယ်ဗျ… မမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းဆိုတာလည်း ရှိတော့ရှိတယ်… မနေ့ကတောင် စာမေးပွဲကျတဲ့ လမ်းထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ပြန်ဖြေမှာလားလို့ ရှည်ပြီး မေးမိလို့ နင့်အပူပါလား? အလကားနေ အားအားယားယား လာလာမေးနေတယ်တဲ့။ အပြောမဆို မတတ်သလိုဖြစ်လို့ အဆဲခံရခါနီးတောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ကိုယ်တွေ့ ကိုယ်တွေ့
စကားတွေကပြောသင့်လား မပြောင်သင့်ဘူးလား မေးသင့်လား မမေးသင့်ဘူးလား
ဆိုတာလူလိုတွေးရင်ရိုးရိုးလေးနားလည်နိုင်တဲ့ အခြေခံလူ့ ကျင့်ဝတ်ပါပဲ